ပြောချင်တဲ့ စကားများ - ၁ | Hash Tech Guru
ပြောချင်တဲ့ စကားများ - ၁
တော်ဖို့ဆိုတာ Gifted ဖြစ်နေစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်… ငယ်ငယ်တုန်းက Genius တွေကို သဘောကျတယ်…တကယ်တန်းတော့ လူတိုင်းက Gifted မဟုတ်တော့ Talent and Sweat ကို အားကိုးရပါတယ်… ကျနော်လဲ ငဒူစာရင်းထဲ ပါတယ်.. ဒူတော့ များများ လေ့လာရပါတယ်… တော်တော်များများက ကျနော့်ကို လေ့လာအားကောင်းတယ်လို့ ပြောကြပေမဲ့ တကယ်တန်း လေ့လာအားကောင်းတယ်ဆိုတာ စာတွေ လိုက်ဖတ်ရင်း တဖြည်းဖြည်း မြန်လာတာပါ… နောက်ပြီး လေ့လာပြီးသလောက် များများလေ့ကျင့်ရပါတယ်… Muscle Memory ရတဲ့အထိ ထပ်ခါ တလဲလဲ လေ့ကျင့်တာပါ.. Laravel ဆိုရင် Multiple Table Relationship နဲ့ CRUD App တစ်ခုကို ၁၅ မိနစ်အတွင်းရေးနိုင်အောင် မြန်ပါတယ်.. အလွတ်ကျက်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး.. သေချာ သိထားပြီး ကျင့်ထားလို့ မြန်တာပါ..
Professional တယောက်အနေနဲ့ ပညာတစ်ခုကို တတ်ကျွမ်းတယ်ဆိုတာ အဲ့ ပညာရပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Practice တွေ အများကြီး လုပ်ထားဖို့ လိုပါတယ်… ကျနော်တို့ Software Development ဘက်မှာ Senior တအား ရှားပါတယ်.. Junior အရမ်းများပါတယ်.. Junior တွေ ဘာလို့ Senior Level တက်လာတာ ရှားလဲဆိုတော့ Deep Learning + Practice မလုပ်လို့ပါ… ဥပမာ Laravel Framework ကို သိတဲ့ Junior တွေ အများကြီးရှိပါတယ်… တကယ်တန်း Senior Level ရောက်မလာကြပါဘူး.. ဘယ်ဆရာဆီမှာ သင်တန်းတက်တက် ဘယ်လောက်ပဲ Tutorial ကြည့်ကြည့် အတူတူပါပဲ.. တော်တော်များများက နည်းနည်းသိသွားပြီဆိုရင် အလုပ်ဖြစ်သလိုပဲ ရေးဖို့ပဲ စဉ်းစားကြပြီး ဆက်မလေ့လာဖြစ်ကြဘူး.. ဒီလိုနဲ့ ပြီးသွားပါတယ်.. Tutorial ထဲက အတိုင်း စာအုပ်ထဲကအတိုင်းပဲ ရေးတတ်တဲ့ Text Book Coder တွေ ဖြစ်ကုန်ပါတယ်.. တစ်ခုခု ပြသနာတက်တယ်ဆိုရင် တက်တဲ့ ပြသနာ ဖြေရှင်းဖို့ပဲ စဉ်းစားပြီး ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့အဖြေကို ရှာတဲ့လူ နည်းပါတယ်.. ကျနော့်အမြင် Professional ဆိုတာ တစ်ခုခု ပြသနာ တက်တိုင်း Google မှာ သွားရှာပြီး အဲ့က နည်းလမ်းအတိုင်းဖြေရှင်းတဲ့လူထက် ကိုယ်ပိုင်သိထားတဲ့ Knowledge ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာ ဖြေရှင်းတဲ့လူလို့ ထင်ပါတယ်… တစ်ခုခုဆိုတိုင်း Google သွားရှာနေတယ်ဆိုတာ အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး
ကျနော်ပြောပြောနေတဲ့ “စောက်စကားမများနဲ့ Code ပဲ ပြ” ( မူရင်း - Talk is Cheap.. Show me the Code ~ Linus Torvald ) ဆိုတာ စောက်ရမ်းကြီး လန်း… စောက်ရမ်းကြီး ထူးချွန်လှစွာသော လူမဖတ်တတ်တဲ့ Code တွေ ရေးတဲ့ Programmer အတော်ကြီးတွေကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး… မင်း ဘာလုပ်ထားဖူးသလဲ ဆိုတာကို ဆိုလိုတာပါ… လူစောက်မြင်ကပ်ပေမဲ့ ဆန်မရှိ စောက်စားကြီး လေကြီးလေကျယ် စောက်ရူးတွေကို ပါးစပ် ပိတ်သွားစေတယ်… “စောက်စကားမများနဲ့ Sweat and Talent ပဲ ပြ” လို့ ပြောချင်တာ…
Talent ဆိုတာ Sweat တွေနဲ့ ကိုယ်တိုင် ထုဆစ်ရပါတယ်… သင်္ဘောပျက်တာ ဘယ်သူမှ မပြင်နိုင်လို့ သင်္ဘောပြင်တဲ့ အဘိုးကြီးကို ခေါ်ပြင်ခိုင်းတာ တူနဲ့ ၂ ချက်ပဲ ထုတာ ပြန်ကောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ ပုံပြင်ရှိတယ်လေ… ထပ်ကာတလဲလဲ လေ့ကျင့်ထားလို့ ဘယ်နားထုရမလဲ သိတာပါ… ပြောချင်တာတော့ သိုင်းတကွက်ကိုပဲ အသေဆော်နိုင်အောင် အများကြီး ကျင့်ထားပါ.. :P Gifted ဖြစ်ဖို့ မလိုပါဘူး.. Talent an Sweat အတွက် Ready ဖြစ်ရင် အိုကေပါပြီ :D အဲ… ကျင့်ထားသလောက် သိသလောက်လေးနဲ့ပဲ ကျေနပ်နေပြန်ရင်တော့ ကြာလေ ကြာလေ ငထုံအကြီးစားဖြစ်လာလိမ့်မယ်
စိတ်ဝင်စားရင် ဒါလေး ကြည့်ကြည့်ပါ